FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY YORK - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any York
Alika mifangaro mifangaro amin'ny Pekingese / Yorkshire Terrier
'Ny bera dia volafotsy sy mainty toy ny dadan'i Yorkie. Manana ny lokon'ny caramel Pekingese an'ny reniny sy ny orona fisaka izy. Bear dia feno fiainana, tia maka, mihazakazaka, mitsambikina ary mihady. Bear tia ny rehetra. Sariaka izy, malefaka ary tena manan-tsaina. Tsy mpikotrika ny bera. Tiavo ity alika ity dia mahatonga anao hitsiky fotsiny mijery azy. '
Ny alika any York dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pekingese ary ny Yorkie . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Tucker the York York lahy, 8 volana, dia nihoatra ny lanjan'ireo ray aman-dreniny roa. Milanja 13 lbs izao izy. Azonao atao ny mahita mazava ny karazany roa amin'ny alika ao Tucker. Izy dia bandy kely tena sariaka sy mahery. izy tia mitsako amin'ny rawhides ary mandeha mandeha lavitra . '
Tucker ny lehilahy Yorkinese
Tucker the York York lahy toy ny alika kely
Sophie the Yorkie / Peke mix (Yorkinese) amin'ny 6 volana
'Ity i Oliver, 10-pounds. Yorkinese. Yorkie ny rainy ary Pekingese ny reniny. Manodidina ny 1 ½ taona eo amin'ity sary ity izy. Izy no alika voajanahary indrindra. Tsy manafana tsara ny alika hafa izy ary miraharaha ny saro-kenatra amin'ny ankizy satria mpitaingina foana isika ary ny ankizy dia tsy tranga isan'andro. Raha vantany vao zatra zaza dia hiara-milalao amin'izy ireo mandra-pialan'ny tongony. Ollie dia tanana vitsivitsy ihany koa tamin'ny fihanaky ny trano. Nanapa-kevitra ny hiara-miasa amin'ny 5 volana eo izy. Fanamby iray izy nefa nivadika ho mpikambana sarobidy indrindra ao amin'ny fianakaviana. Ny sasany amin'ireo quirks hafa dia izy tsy nanomboka nidina tohatra raha tsy vao 2 taona mahery. Miakatra tohatra izy raha vantany vao ampy hahatratra ny tongony. Maka am-bava sakafo izy ary miditra amin'ny efitrano hafa hihinanana azy, ary izy ihany koa ny alikantsika. Nahita azy izahay telo volana. Tiany ny hokapaina ny volon-dohany fa tsy tia borosy dia manaikitra amin'ny sisiny na borosy. Matory any ambadiky ny fandriana izy na eo ambony ondana. Oliver: ilay namana tonga lafatra. '
Alika kely any York any 5 herinandro, sary natolotry ny Kennels 3 Pines
'Lil' Chex (tononina hoe 'fanamarinana') ny York any 8 herinandro - ny reniny dia 8-lb. Pekingese sy ny rainy dia 6-lb. Yorkshire Terrier. Diso hevitra foana izy fa mini Rott ... henontsika foana ny filazan'ny hafa fa tsy kely dia kely ny Rott-ny. '
jack russell terrier mix karazany
beagle bulldog afangaro tanteraka
Jack Russell sy pitbull mifangaro